Pandinofunga makore mashomanana, munoziva, sei nokukurumidza uye irreversibly achinja hwedu hwezuva nezuva. Kuvaka uye kukudziridza dzaishandiswa network makuru muzvitoro. Somusidhari howa, peturu zvechitima. Kune zvitsva vaizotibata uye namahwindo mabhanga havana mhosva pacharo. Pane imwe zvigadzirwa zvavo ichakurukurwa munyaya ino. Plastic makadhi. Sei nyore hwedu vava nezvechitarisiko chavo, udza zvakare. Kubhadhara zvinhu uye mabasa kwava nyore. Cash dzakawanda wasvava. Mamiriro acho ezvinhu akadaro kuti nokukurumidza bepa uye mari simbi haangazozikamwi kunodiwa zvachose. Zvose zvivanakire cashless kubhadhara, pane imwe drawback. Inoitwa pakuti kana kushandisa mukana munowanika zvakazara, unofanira kupedza imwe nguva kudzidza sei kuisa mari pamusoro kadhi "akachengeta". Unofanirawo kufunga kuishandisa ari Masvomhu paIndaneti, iro richiri ine zvinhu kuti upenyu hwedu vajairane.
Kana zviri ndaitambira mari kadhi, zvikwereti kana mari, pane imwe nguva zvinoreva kupera, uye ipapo tinofanira kuzadza nayo. Nzira kuita izvi, pane zvakawanda. Tichataura pamusoro sei kuisa mari pamusoro kadhi, "mari Bank" zvizere.
Isa mari iri pakadhi "mari" ndiyo nyore pamusoro pakaunda chero matavi. Cash inotanga akazadza risiti, izvo zvinofanira kutaridzwa mari mamwe mashoko. Nzira iyi zvakanaka nokuti anowedzera kadhi nepakati kwenguva pfupi zvikuru nguva, kunyange zvazvo dzimwe recharge nzira kutadza nguva hwokushanda.
nzira yechipiri sei kuisa mari pamusoro kadhi "nemari"
Kana chikumbiro zvakananga keshiya hazvibviri nokuda imwe nguva inopportune, iyo remoteness bazi kana kuti chero chikonzero, zvinokwanisika kuita pamusoro-up achibatsirwa unyanzvi ATM. Recent anenge indistinguishable kubva kwakajairika dzomuzana kunze pakuvara optioneel tireyi pakugamuchira mari. Inowanikwa pakati ATMs inopa mukana wekuti Muterere pamwe danho nedanho nezvatinoita.
Nzira sei muzadze kadhi "nemari" rechitatu
Kana pasina ATM kutsvakwa pamahombekombe, ipapo pamusoro-up kadhi zvinogona kushandisa upi inouraya mubhadharo enyika. A chinokosha drawback kuti nzira iri kupedza chikamu mari. Deducted rwoga, asi chinouraya Muterere inowanzoratidza ruzivo pamusoro wayo ukuru.
A nzira chechina sei kuisa mari iri mubhengi kadhi
Kana usingakwanisi kana vasingadi kusiya madziro eimba, uye recharge - zviri unopfuura kukosha, muchiitiko ichi, unogona kushandisa kuminamato kuripwa enyika paIndaneti. Pari, nomumbure kwakadaro mashoma. Kushanda pamwe mari nokuyerera ivo dzatangwa gangbusters. Pane mukana kwete chete kuti zadzai nechiyero, asi kuti kuisa mari kuburikidza kadhi "mari" kudzokera nhoroondo iri muripo mugadziriro. By nezvayakaipira zvinosanganisira zvose zvakafanana chikamu mari zvaitambidzwa uye kuchinjwa nguva. Chokwadi chokuti chekubuda mari iri mapurasitiki kadhi haisi musi iwoyo, asi chete kune chinotevera, uye kana ari mushandi. Kana shanduro rinoitwa musi Chishanu, mari vachaenda nhoroondo chete neMuvhuro.
Ndinogona kutora mari kubva "Steam"? nemitemo nzira
Offshore Makambani - chii ichi? Sei kuongorora kana ane pemvura kambani?
The mari yema mapurofesa: kuseka, uye chivi
Ndinoziva sei chikwereti bailiffs uye kutarisa kunze
The pawn zvitoro Penza: kero uye nguva purogiramu
Chinokosha uye mari ezvinhu muUkraine: mari yokurarama
Description of pachipatara pacho "Svetlana" (Sochi), wongororo. Pachipatara pacho "Svetlana" (Sochi): mapikicha vashanyi
Anogona zvidzidzo. How kuti topiary pamusoro Cotton dhisiki?
Kuderera kukirosha stitches: dzakakurumbira nzira
The zviduku makumbo mana vaiendeswa - itsva mapurisa fadza Taiwan
Ford Focus Sedan - iri kutengeswa kupfuura motokari munyika
Hotel Calypso Hotel Siviri 2 * (Greece, Kassandra kweItari): tsananguro, mabasa, wongororo
'Sanorin': mirayiridzo kushandiswa.
Motorcycle Yamaha muvakweve Star - tora kurota kwenyu
Dmitry Zolotukhin, actor: biography uye filmography
Kinesthetics vanhu vekufamba. Kana kuti pfungwa yacho yakazara here?